Waxaanu u balanqaadaynaa
100% tayada alaabta gudaha Thailand. Waxaan nahay qaybta rasmiga ee HGH ee Thailand. Dhamaan alaabtayadu waxay leeyihiin shahaadooyin iyo ruqsado tayo leh. Waxaan si daacadnimo ah u shaqeynaa oo kaliya oo leh alaab-qeybiyeyaasha rasmiga ah, waxaanu hubineynaa tayada 100% ee alaabta
Waxaan kuu dammaanad qaadeynaa alaabtaada wakhtiga lagu qeexay habka gudbinta
Dhammaan alaabooyinka hormoonada koritaanka waxaan u dirnaa sanduuqa qaboojinta gaarka ah, si loo ilaaliyo daroogada
Waxaan daryeeli karnaa macaamiisheena, waxaan diyaar u nahay in aan bixinno la-talin lacag la'aan ah Isniinta - Sabtiga inta lagu jiro saacadaha ganacsiga
Waxaan damaanad qaadeynaa soo celinta alaabta iyo lacagaha xaaladaha aan la fileynin sida daadad ama duufaan, dab ama dhulgariir. Qalabka khaldan ee adeegga boostada, dhammaan alaabtu waa la socotaa tirinta tirooyinka. Waxaad mas'uul ka tahay cinwaanka maraakiibta qaldan iyo xogtaada shakhsi ahaaneed